Raysal wasaha somaliya oo barlamaanka puntland kala hadlay 3 qodob – SBC
Raysal wasaha somaliya oo barlamaanka puntland kala hadlay 3 qodob
Posted by Webmaster on March 10, 2013 Comments
Raysal wasaraha Soomaaliya Cabdi Farax Shidroodn oo hada ku sugan Garowe ayaa hadalkaan ka jeediyay Xarunta barlamaanka ee Garowe xili uu warbixin ka siinayey DF ee Somaliya , waxaana uu sheegay in Federaalismka uu yahay midka soomaaliya ay kaga baxayso dhibaatooyinka dagaal , abaaro iyo dowlad la,antii ay soo martay labatankii sano ee la soo dhafay ayna ka soo horjeedin xukumadiisu.
Saacid waxaa uu si qote dheer uga hadlay hanaanka Federaalka oo ay hormuud ka ahayd Puntland, isagoo tusaale u soo qaatey Maamul u samaynta Jubooyinka oo tuhun wayn ka qabeen Dadka qarkii iyo mamulada ka jiray Somaliya sida Puntland oo faro galin ay ku haysay DF sida ay sheegen Puntland ayuu ku tilmamay mid ay soo dhawaynayaan in maamul loo sameeyay Jubbooyinka oo uu sheegay in ay raali ka yihiin layskana saro tuhunkii horay loo qabay in Dalka aan laga hirgalin Federalismka.
Raysal was are saacid waxaa sidoo kale uu ka hadlay khilaafka qorsoonaa ee kala dhexeeyay Puntland iyo DF ee Somaliya oo uu sheegay in uusan ahayn mid laysu qariyo wax hadii laysu qabo oo aan laysu marin warbaahinta ama qoraalo laga soo saare wixii la qabo taas oo ula jeeday mugdiga soo kala dhexgalay labada dhinac in ay dhamanayso hadii sidaan oo kale laysu horfariisto.
Hadalka raysal wasaraha oo aad u dheera kana hadlayey arrimo la xirira Federalimka, Jubooyinka , iyo xirirka labada dhinac ayaa hadaladda laga dheehan karay kuwa dabac badan ka muuqdo halka markii hore ay kala joogeen puntland iyo DF oo aamusnaan uga bixi labada dhinac.
Hadaynu xusno hadalka nuxurkiisa waxaa meesha ka baxay Puntland tuhunkii ay ka qabtay nidaamka Federalisma oo ay DF ay doonaysay in wax laga badalo dastuurka oo Raysal wasaruhuu uu sheegay in waxaa kaliya oo lagu heshiiyay waxna laga badali Karin uu yahay Dastuurka Somaliya.
Arinta kale oo Puntland micnaha u samaynasa aya hay oo uu ka dhawaajiyey in ay isku mowqif ka tagan yihiin Maamul u samaynta Jubooyinka oo dadka degankaasi ay u taal Dowlad Federalka ahna ay u taal in ay tageerto.
Inkastoo aysan jirin qodob rasmi ah ee ay ku heshiyeen labada dhinac hadana waxa muuqada saan saan isu soo dhawaansho oo aan la sadalin kari lagana hordhici Karin waxaa ay noqon doonto.
Intaa kadib ayaa raysal wasaraha waxaa uu booqday isagoo ay la socdaan Madaxwaynaha Puntland iyo wafdigii kala yimid Muqdisho Xarumo ay ka mid ahayeen wasaradaha Puntland Xarunta Madaxtooyada iyo Idaacada Iyo TVga Puntland ay yeelanasyo.